ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): May 2010
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:20 AM0comments Links to this post
ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၂)
အရှင်ဇ၀န (http://www.ashinjavana.blogspot.com) ၏ ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု
My dear Dakataw,
It isagreat pleasure for me that I read your article on how to make the Buddha's Sasana perpetuated foralong time and how the Buddha's disciples should learn the Buddhist scriptures or practice meditation. I think your article suggests to learn the Buddhist scriptures and engage in meditation the Buddha's disciples whom are lack of learning and practicing meditation. It advises the way how to spread the Buddha's Sasana in modern systems and qualification than amount is very essential in the Buddha's Sasana. Your advice of "the Buddhist monks who are lack of learning and practicing meditation" should disrobe and serve to develop ones' country, is very useful not only for the Buddha's Sasana but also for our country . The Buddha said that "There should be only the persons who are powerful and energetic in Buddha's Sasana. Other wise,we can say that there should not be the persons who are lazy in Buddha's Sasana. That is why I grantee your article is very useful to propagate the Buddha's Sasasa and to develop our country. Please suggest you to continue to write it. May you attain to Nibbana which is free from suffering because of your good deeds!
With infinite loving-kindness
ကမ်းစပ်သို့ ...အတွေး တောင်ပံခတ်သံ (သို့ ) ညီလေးဖိုးသားအတွက် မွေးနေ့ လက်ဆောင်
ကိုပြည့်စုံအောင် (ဖိုးသား) (www.apymt.com) အတွက်
ဒီတစ်ခေါက် ညီ့မွေးနေ့ ကိုတော့ ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်း အစ်ကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စာတွေထဲက အစ်ကို့ အတွက် Food For Thoughts ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ ကို ညီ့အတွက် ငွေရတုမွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
“သင်တို့ ဟာ အသိပညာရရှိရေး၊ အမှန်တရားကို သိမြင်ရေးနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တိုးတက်ရေးအတွက် အားမထုတ်ကြဘဲ တစ်နေ့ ပြီး တစ်နေ့ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးတက်ရေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားရေး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ဇောရေးအတွက်သာ လောဘတကြီး ကြိုးစားနေခြင်းကို မရှက်ကြသလော....”
ဆော့ခရတ္တိက သူ့ ကို သေဒဏ်ပေးဖို့ အပြစ်ရှာကြတဲ့ ဂျူရီလူကြီးတွေကို ပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကားပါ။
အစ်ကို ကတော့ ဆော့ခရတ္တိစကားဟာ ဂျူရီလူကြီးတွေကို ရည်ရွယ်ပြောလိုက်ပေမယ့်လို့အစ်ကို အပါအ၀င် လူတော်တော်များများကို ရည်ရွယ်ပြောလိုက်သလားလို့ တောင် ထင်မိပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အစ်ကိုတို့ နေ့ စဉ်နှင့်အမျှ ဘ၀ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတာမှာ ဆော့ခရတ္တိ အပြစ်ပြပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေနှင့်လွတ်တဲ့နေ့ များ ရှိမှရှိရဲ့ လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလုံမလဲတွေးမိလို့ ပါ ညီရေ။
ခုနက ဆော့ခရတ္တိပြောခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေ၊ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ က လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ မြှင့်တင်ပေးတဲ့ အထောက်အကူတွေဖြစ်နေလေတော့ ဒါတွေမရှိရင် ဘ၀ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဘာနဲ့ တိုင်းတာမလဲလို့ဆက်ပြီး တွေးမိတယ်။ ဘုန်းဘုန်း ရဝေနွယ်ရဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာတော့
လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဘာနဲ့ ဆုံးဖြတ်မလဲ။ ရာထူးဌာနန္တရ၊ ငွေကြေးဥစ္စာ၊ ပညာ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု၊ အခြံအရံတွေနဲ့ တိုင်းတာမလား။
ဒါတွေနဲ့ တိုင်းတာလို့မရပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဆိုတဲ့ သိက္ခာသုံးပါးနဲ့ပဲ တိုင်းတာရမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ သိက္ခာသုံးပါးနဲ့ ပြည့်စုံနေရင် တန်ဖိုးရှိနေတာပါပဲ။
လို့ဆိုထားတာ တွေ့ တယ်။ ဒါကို ဖတ်မိပြန်တော့ ခုနက ဆော့ခရတ္တိစကားကြောင့် လိပ်ပြာမလုံရတဲ့အထဲ ကိုယ့်ဖာသာ ငါ တကယ်ကော တန်ဖိုးရှိရဲ့ လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ထပ်မေးရပြန်ရော ညီရေ။
အနှစ်တစ်ရာနေမှ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပေါ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်ပေါ်တဲ့ လိပ်ကန်းကြီးနဲ့အဲဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာပဲ မျောနေတဲ့ အပေါက်တစ်ခုတည်းပါတဲ့ ထမ်းပိုးတုံးတစ်ခုတို့လိပ်ရဲ့ ခေါင်းနှင့် ထမ်းပိုးရဲ့ အပေါက်တို့ စွပ်မိဖို့ လွယ်ချင်လွယ်ဦးမယ်။ အပါယ်ဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့ဘုံဘ၀မျိုးကို တစ်ကြိမ်ရောက်သွားတဲ့သူဟာ ကောင်းမြတ်တဲ့ လူ့ ဘ၀မျိုးကို ပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ ကတော့ မလွယ်တော့ဘူးတဲ့။ လိပ်ကန်းထမ်းပိုးစွပ်နိုင်ခွင့်ထက် အဆ အရာ၊ အထောင်မက ခဲယဉ်းတယ်တဲ့။
ဒီစကားစုကို အစ်ကိုတို့ တစ်တွေဟာ ခဏခဏကြားလည်း ကြားနေရသလို၊ ကိုယ်တိုင်လည်း သူများတွေကို ပြောပြဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုကြားရတိုင်း၊ ပြောဖြစ်တိုင်းမှာလည်း လူဖြစ်ရခြင်းအတွက် မိမိကိုယ်မိမိ သိသိသာသာရော၊ မသိမသာပါ စိတ်ထဲက ဂုဏ်ယူနေမိတတ်ပါတယ်။
လူအဖြစ် လူ့ ဘ၀ကို ရလာတယ်၊ ရောက်လာတယ်ပဲ ထားပါဦး၊ အဲဒီလူဟာ အယူလွဲ၊ အမှတ်လွဲဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်နေရင်...
အဲဒီလူဟာ ကံနဲ့ ကံရဲ့ အကျိုးဆက်ကို မယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်နေရင်...
ရုပ်သည်သာ အမှန်အရှိတရား၊ ကျန်တာတွေ မရှိတရား၊ မဟုတ်တရားတွေလို့ယုံနေတဲ့ ရုပ်ဝါဒီဖြစ်နေရင်....
မှန်တယ် မှားတယ်လို့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ သံသယ၀ါဒီ ဖြစ်နေရင်....
သေတော့လည်း အားလုံး ပြီးဆုံးပြတ်စဲသွားတာပါပဲလို့ယုံကြည်နေသူ ဖြစ်နေရင်....
လူဟာ ဘ၀အကြောင်း နားလည်ဖို့ မဟုတ်၊ ဘ၀ရဲ့ သုခ ဒုက္ခကို ခံစားတွေ့ ကြုံဖို့ဖြစ်လာတာလို့ခံယူသူဖြစ်နေရင်....
ဒီလိုမျိုး ဆက်စဉ်းစားကြည့်မိတဲ့ အခိုက်မှာတော့ လူဖြစ်ရခြင်းအပေါ် ဂုဏ်ယူနေမိတဲ့စိတ်နေရာမှာ လူအဖြစ်နဲ့ ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေမှ ကောင်းတဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းလဲ... ဆိုတဲ့ အတွေးက နေရာယူပြီး စိတ်ပင်ပန်းမှုနှင့်အတူ သက်ပြင်းမောကြီး ချဖြစ်လိုက်တယ် ညီရေ။
ဘုန်းဘုန်း ဓမ္မဂင်္ဂါရဲ့အတွင်းသားကို တူးဖြိုမိခြင်း ဆိုတဲ့ ပို့ စ်ကို ညီ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဇာတသတ်မင်းအကြောင်းရေးထားတာ။ အဲဒီပို့ စ်ကို အစ်ကို ဖတ်ပြီး သိပ်မကြာခင်ပဲ ဘုန်းဘုန်းရဝေနွယ်ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုး ရှိတယ်တဲ့။
၁။ ပါရမီ မပါခဲ့တဲ့သူရယ်။
၂။ ပါရမီ ပါခဲ့တဲ့သူရယ်။
ပစ္ဆိမဘ၀ိကပုဂ္ဂိုလ် ဆိုတာက ဒီဘ၀ ဧကန်မုချ ရဟန္တာဖြစ်ရမယ့်သူပါ။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပဲ စိတ်ချရပါတယ်တဲ့။
အဇာတသတ်မင်းဟာ တရားထူးရဖို့ အတွက်တော့ ပါရမီပါခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်ကို မိမိ မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အတွက် တရားထူးနဲ့ ဝေးသွားရပါတယ်။
ပသေနဒီကောသလမင်းကြီးတို့ ၊ ဝေရဉ္ဖပုဏ္ဏားတို့ ကျတော့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ အကြာကြီး တွေ့ ရပေမယ့် ပါရမီမပါခဲ့လို့တရားထူး မရကြတာပါ။
ဒါတွေကိုထောက်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုမိမိ တည်ဆောက်ခြင်းဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ သိပ်ပြီးအရေးကြီးပါတယ်။
သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရားက မင်္ဂလာ (၃၈)ပါးမှာ အတ္တသမ္မာပဏိဓိ = မိမိကိုယ်ကို မိမိတည်ဆောက်ခြင်း မင်္ဂလာဟာ အရေးအကြီးဆုံးပါတဲ့။ မိမိကိုယ်ကို မိမိတည်ဆောက်လိုက်တာနဲ့ ကျန်တဲ့ မင်္ဂလာ (၃၇)ပါးလည်း ပြည့်စုံသွားတော့တာပါဘဲတဲ့။
(ဘုန်းဘုန်း ဓမ္မဂင်္ဂါစကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ အတွင်းသားကို မတူးဖြိုမိဖို့သိပ်အရေးကြီးပါတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။)
ဒါလေးဖတ်မိတော့ မိမိကိုယ်ကို မိမိတည်ဆောက်ဖို့ အတွက် တကယ်အရေးကြီးပါလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးရင်း ဒီဘ၀အတွက် စိတ်ချရတဲ့ ပစ္ဆိမဘ၀ိက ပုဂ္ဂိုလ် ဟုတ် မဟုတ် ဘယ်လို စမ်းလို့ ရနိုင်မလဲ လို့ပေါက်ကရတော့ တွေးလိုက်မိသေးတယ် ညီရေ။
ဘယ်အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်၊ ဆရာဝန်အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်၊ ကျောင်းဆရာအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်၊ ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်၊ ကားမောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်လုပ်၊ အရင်ဆုံး အဲဒီစိတ်ထားနဲ့အဲဒီစေတနာကပဲ ရှေ့ ကသွားရမှာပဲ။ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်လောက်ကို လိုချင်ရင်တော့ ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲတွေကို အကူအညီပေးချင်တယ်။ ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့စေတနာ အပြည့်အ၀ပါနေရင် ဆရာဝန်မဖြစ်တောင်မှ တစ်နည်းနည်းနဲ့ တော့ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့လူ ဖြစ်လာမှာပဲ။ ကျန်းမာရေးစာပေရေးတာတို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ နောက်ဆုံး ဆေးဆိုင်ဖွင့်မယ်။ ဈေးချိုချိုနဲ့ဆေးကောင်းကောင်းလေးတွေ ရောင်းပေးလိုက်မယ်။
ကိုယ့်စေတနာကဘာလဲ။ လူအများ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ အဆင်ပြေဖို့ ။ ဒါပဲ။ ငါဆရာဝန်ဖြစ်ရဖို့ ဆိုတာ အဓိကမဟုတ်ဘူး။ လူတွေကို ပညာတတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် ငါကကျောင်းဆရာမဟုတ်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တွေးဖို့ မလိုဘူး။ ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေ လူတွေဖတ်ဖြစ်သွားအောင် လူတွေလက်ထဲရောက်သွားအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်လို့ ရတယ်။ နောက်ဆုံးစာအုပ်အငှားဆိုင်လေး ဖွင့်တာကအစ လုပ်လို့ ရတယ်။ ကောင်းတဲ့စာပေတွေငှားမယ်၊ ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ ငှားမယ်၊ လူတွေများများ စာဖတ်ပါစေ။
ကိုယ့်စေတနာသာမှန်ရင် ကိုယ်စေတနာထားတဲ့ အလုပ်ကို တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့အောင်မြင်အောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စေတနာကို အရင်ဆုံး ပီပြင်အောင်လုပ်ဖို့ လိုတယ်။
ဒါလေးဖတ်ဖြစ်တော့ လူတစ်ယောက်ဘ၀မှာ ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်မလာသေးခင် (သို့ ) မဖြစ်တော့ရင်တောင်မှ တစ်နည်းနည်းနဲ့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကို စေတနာမှန်မှန်ထားပြီး တစ်နည်းနည်းနှင့် အောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။
အစ်ကိုတို့ ညီတို့ဘလော့ဂ်ရေးနေတဲ့သူတွေအနေနှင့်လည်း အကိုတို့ ဆီ စာလာဖတ်ကြတဲ့သူတွေအတွက် တကယ်တန်ဖိုးရှိပြီး အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ စာတွေ တရားတွေကို ဖြန့် ဖြူးပေးနိုင်ရဲ့ လား၊ ကိုယ့်ဆီစာလာဖတ်နေတဲ့သူတွေအပေါ် စေတနာတကယ်မှန်ရဲ့ လားလို့ လည်း ပြန်စမ်းစစ်မိပါတယ် ညီရေ။
ကဲ...ညီရေ...။ ဒီလောက်နဲ့ ဘဲ အကို့ ရဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် တွေးစရာလေးတွေ ကို ကျေနပ်ပေးပါနော်။
ညီငယ်တစ်ယောက် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိအကျိုး၊ လောကအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်း ငွေရတု မွေးနေ့ အတွက် အမှတ်တရ ဒီစာစုနဲ့ အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘာကို တန်ဖိုးထားရမလဲ (ဆရာတော်ဦးဇောတိက)
၂။ စိတ်ညစ်ရင်ရေချိုးပါ (ဆရာတော် ရဝေနွယ်-အင်းမ)
၃။ သမုဒ်ပင်လယ်ပြာ နှိုင်းပမာ (ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံ)
အတွင်းသားကို တူးဖြိုမိခြင်း (ဓမ္မဂင်္ဂါ)
“မြစ်တစ်ခု စီးဆင်းမှု နရီ (သို့) ညီလေး ဖိုးသားအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်” (၂၀၀၉ ခုနှစ်)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:41 AM0comments Links to this post
ဘုန်းဘုန်း အရှင်တိက္ခဉာဏလင်္ကာရ (ယောအသင်း) အတွက် မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အမှတ်တရ
ဒီတစ်ခါ ဘုန်းဘုန်း မွေးနေ့ ကိုတော့ တပည့်တော် စဉ်းစားစရာလေးတွေ လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းထဲ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်ထဲက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဖတ်ဖတ်ပြီးချင်းဘဲ ဘုန်းဘုန်းကို ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်တာလေးကို ရေးပြီး လက်ဆောင်ပေးတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးမိတယ်။
ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံရဲ့“သမုဒ်ပင်လယ်ပြာ နှိုင်းပမာ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက “သူတို့ တွေနဲ့ မတူချင်” ဆိုတဲ့ ဓမ္မဆောင်းပါးလေးပါ။
ဘုန်းဘုန်း မူရင်းဆောင်းပါးကို အရင်ဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်။
ဘုန်းဘုန်းရေ။ ဆောင်းပါးလေး ဖတ်ပြီး ဘာများ တွေးမိလိုက်သလဲ။
တပည့်တော်တော့ ငါဘယ်လူအမျိုးအစားထဲပါနေပါလိမ့်လို့ချက်ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို စစ်ဖြစ်တယ်။ တပည့်တော်ကတော့ တမျိုးတည်းကို တိုက်ရိုက်တူတာမျိုးတော့ မဖြစ်ဘူး။ အဲဒီခုနစ်ဦးလုံး ရောနေတတ်တဲ့ အမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်နေတာ သတိထားမိတယ်။ တခါတလေ လောကကို အဆိုးမြင်လိုက်၊ တခါတလေ အကောင်းမြင်လိုက်၊ တခါတလေ အတ္တကြီးလိုက်၊ တခါတလေ အများအကျိုးဆောင်ရွက်ချင်လိုက်၊ တခါတလေ ဖြစ်သမျှ ကြုံလာသမျှ အံကြိတ်ခံလိုက်၊ တခါတလေ မြင်သမျှ တွေ့ သမျှ စူးစမ်းလိုက် (စပ်စုလိုက်)၊ တခါတလေ ရှေ့ ရေး နောက်ရေး မစဉ်းစားပဲ ကလေးတစ်ယောက်လို ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဆိုပြီး သဘောထားလိုက်နဲ့ ပဲ ဆယ်စုနှစ်တွေဖြတ်သန်းလာလိုက်တာ မနဲတော့ဘူးဘုရား။
ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံကတော့ အဲဒီလူ ခုနစ်မျိုးနှင့်မတူချင်ဘူးလို့ ဆိုထားတာပဲ။ ဒီခုနစ်မျိုးကနေ လွတ်အောင်နေလို့ ရမယ့် ဘ၀အခြေအနေတစ်ခုကို ပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့ အတွက်ကတော့ တပည့်တော် အနေနဲ့ ဆိုရင် အချိန်တစ်ခုယူပြီး ကံ၊ဉာဏ်၊ ၀ိရိယတွေနှင့် အားသွန်ခွန်စိုက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို အကြီးအကျယ်လုပ်ဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်တာပဲ။ ဘာလို့ လဲဆို... တပည့်တော်မှာ မွေးရာပါ အပျင်းဓါတ်ခံက အားကြီးလေတော့ ဒီလိုမျိုးလုပ်မှပဲ ရတော့မယ်။
ဘုန်းဘုန်းဆိုရင်ကော ဘယ်လိုလဲဘုရား။ ဘုန်းဘုန်းလည်း အခုဆိုရင် ဆယ်စုနှစ်တွေသုံးခါလောက်ဖြတ်သန်းလာပြီးချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လူအမျိုးအစားထဲမှာ ငါအဖြစ်များနေလဲဆိုတာ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ရင် အဖြေတော့ထွက်လာမှာပါပဲနော်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဒီခုနစ်မျိုးကနေ လွတ်ထွက်နေတဲ့ လူပုံစံတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်မှာပါပဲ။ ကိုယ့်အခြေအနေကတော့ ကိုယ့်ဖာသာပဲ အသိဆုံး ဖြစ်မှာပါနော်။
ဘုန်းဘုန်းအတွက် မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် ဆရာ့ဆောင်းပါးနှင့် ဒီပို့ စ်လေးကို အမှတ်တရ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်း အသက်ရာကျော်ရှည်လို့သာသနာတော်အကျိုး၊ အများအကျိုး၊ မိမိအကျိုးကို သူမတူအောင် သယ်ပိုးရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ရင်ထဲက ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဘုရား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:20 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:10 AM5comments Links to this post
ကျွန်တော်နှင့် သေခြင်းအပေါ် အရပ်ဓလေ့များ
ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတွေအားလုံး နာရေးကိစ္စမှာ အတွေ့ အကြုံလုံးဝမရှိကြတော့ ရပ်မိရပ်ဖတွေကဘဲ အမေ့ကိစ္စမှာ ၀ိုင်းကူပြီး အကုန်စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ တွေစီစဉ်ပေးမှုကြောင့် ကိစ္စအားလုံးနီးပါး အဆင်ပြေချောမွေ့ မှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်လို့မထင်မှတ်တဲ့ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ရှုပ်စရာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ကျွန်တော် သူတို့ အားလုံးကို အခုအချိန်အထိ ကျေးဇူးတင်နေတုန်းပါဘဲ။ သာရေးကိစ္စမှာ ကူညီတာထက် နာရေးမှာ အားတက်သရော ၀ိုင်းကူပေးကြတဲ့ ကျေးဇူးက တစ်သက်မေ့စရာ မဟုတ်တဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေပါဘဲ။
အမေ့ကို ဆေးရုံကနေ ပြန်သယ်လာပြီး အိမ်ရောက်ရောက်ချင်းဘဲ အိမ်နားကလူတွေ အမေဆုံးပြီဆိုတာ သိသွားကြတာနဲ့ အသီးသီးရောက်လာပြီး ကူညီကြတော့တာပါ။ ရေချိုးပေးတဲ့သူက ချိုးပေး၊ အ၀တ်အစားပြင်ပေးတဲ့သူကပြင်ပေး၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ကျွန်တော် သတိထားမိတာကတော့ အမေ့ကို ပြင်ထားတဲ့ကုတင်ပါဘဲ။ မေးကြည့်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက သွားသယ်လာတာလို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်အပိုတွေ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး ရှိနေတာကို ဘာလို့ ထုတ်မသုံးတာပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ “ဒါ အရပ်ဓလေ့လေ” လို့အနားက တစ်ယောက်က ဆိုလာတော့ “သြော်။ ကိုယ်ကမှ နားမလည်တာ၊ နားလည်တဲ့သူတွေ စီစဉ်ထားကြတာ အပြစ်မတင်ကောင်းပါဘူးလေ” လို့ငြိမ်နေလိုက်ရပါတယ်။
အမေ့ပါးစပ်ထဲလည်း မတ်စေ့ ထည့်ပေးထားတယ်လို့သိရတယ်။ အင်း....အမေတော့ ဒုက္ခဘဲ။ ဒီမတ်စေ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ခိုးလိုးခုလုတော့ ဖြစ်နေတော့မယ်လို့ပေါက်ကရ က တွေးမိလိုက်သေး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမတ်စေ့ကို ခဲရာခဲစစ် ရှာဖွေပြီး ထည့်ပေးထားတဲ့သူကိုတော့ ချီးမွှမ်းခန်းဖွင့်ရမှာပဲ။
ညသန်းခေါင် အတော်လေးကျော်လာတော့ အိမ်ကလူတွေက ကျွန်တော့်ကို သွားအိပ်ခိုင်းပါတယ်။ မနက်ဖြန်မနက် ကျောင်းသွားပြီး စာမေးပွဲဖြေရအုံးမယ်ဆိုတော့။ နားသင့်ပြီပေါ့။ ကျွန်တော့်မှာ စာမေးပွဲကိစ္စက ခေါင်းထဲမှာ ပျောက်နေပါပြီ။ ကြည့်ထားတဲ့စာတွေတောင် ဘယ်ဆီရောက်ကုန်ပြီမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေတာတော့ သွားဖြေရမယ်ဆိုတော့ အခုအချိန်က နားသင့်တာအမှန်ပါဘဲ။ ကျွန်တော့်ကို အဖော်လိုက်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းလည်း သူလည်း နားချင်ရှာမယ်ဆိုတော့ သူ့ အတွက် အိပ်ယာနေရာ စီစဉ်ပေးပြီး ကျွန်တော်လည်း အိပ်ခန်းထဲဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ အိပ်လို့ မပျော်၊ နားလို့ လည်း မရပါဘူး။ ခေါင်းထဲမှာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး အစကနေအဆုံး ပြန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်နေမိပါတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို အမေက အကောင်းကြီးကနေ ဗြုံးစားကြီး ရောဂါဖောက်ပြီး ဆုံးသွားတာပါလိမ့်။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ ဒီရောဂါက အမေ့ကိုယ်ထဲမှာ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်နေတာနေမှာပါ။ အမေလည်း သတိမထားမိ၊ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း မသိဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ရောဂါသည်းချိန်ကျမှ အားလုံး သိလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်မယ်လို့ယူဆမိတာပါဘဲ။
နောက် အမေ့ရဲ့ ဈာပနကိစ္စအားလုံး ချောချောမွေ့ မွေ့ ဖြစ်ဖို့ အတွက်လည်း လောလောဆယ် အိမ်မှာရှိနေတဲ့ သားတစ်ယောက်အနေနှင့် လုပ်ရမယ့် ၀တ္တရားတွေအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင် စဉ်းစားရင်းနှင့် မိုးသာလင်းသွားပါတယ်။ တစ်ရေးမှ မအိပ်လိုက်ရပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဘဲ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက် အ၀တ်အစားလဲပြီး ကျောင်းသွားစာမေးပွဲဖြေဖို့ အတွက် ပြင်ရပါတော့တယ်။
ကျောင်းကနေ စာမေးပွဲဖြေပြီးတာနှင့် အိမ်ကို ချက်ချင်းတန်းပြန်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တာနှင့် လူကြီးတွေ မောင်နှမတွေနှင့်တိုင်ပင်ပြီး ဈာပနကိစ္စလိုအပ်မယ့်ဟာတွေအားလုံးကို စီစဉ်ကြပါတယ်။
အမေ့ကို ဂူသွင်းမှာဆိုတော့ အုတ်ဂူဆောက်ဖို့ ကိစ္စ၊ သုဿန်မှာ မြေနေရာဝယ်ဖို့ ကိစ္စတွေ၊ အမေ့ကိုထည့်ဖို့Coffin လုပ်ဖို့ ကိစ္စတွေ ဒီကနေ့ အပြီး စီစဉ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတွေအားလုံးဘဲ အမေ့ကို သေသွားပြီဘဲ၊ ပြီး ပြီးရော ဆိုတာမျိုး ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ တတ်နိုင်သလောက် ကျွန်တော်တို့ အတိုင်းအတာနှင့် အကောင်းဆုံး အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အမေရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးပဲလေ....။ အမေ သိသိ..မသိသိ ကျွန်တော်တို့ တွေကတော့ အကောင်းဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားစီစဉ်ပေးမှာပါဘဲ။
ကျွန်တော်က coffin ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် အော်ဒါမှာဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ အားလုံးက သဘောတူတဲ့အတွက် ဒီတာဝန်ကို ကျွန်တော်ဘဲယူပြီး ရန်ကုန်က သုဿန်တစ်ခုမှာ coffin သွားဝယ်ပါတယ်။
အဲဒီရောက်တော့ သူတို့ လုပ်ထားပြီးသားတွေနှင့် ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွေထဲက ကြိုက်တဲ့ပုံလိုက်ရှာလိုက်တော့ ခရစ်ယာန်တွေ သုံးတတ်ကြတဲ့ ဒီဇိုင်းကို သဘောကျတာနှင့် မှာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အမေက ၀တယ်ဆိုတော့ အပေါ်ပိုင်း ရင်ဘက်နေရာက ကျယ်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးပေါ့။
နောက် အမေဆုံးတဲ့ နှစ်တွေတုန်းက နာရေးကူညီမှုအသင်းတွေက ခေတ်မစားသေးတော့ ကျွန်တော်တို့ မြို့ မှာဆိုရင် ဈာပနယာဉ်ဆိုတာက ကြုံသလို ဖြစ်သလို စီစဉ်ကြရတာဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ coffin ၀ယ်တဲ့ဆီကဘဲ ကားတစ်ခါတည်း ငှားလာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:10 AM0comments Links to this post
ငါသည် သေခြင်းသဘောရှိသည်ဖြစ်၏။ သေခြင်းသဘောတရားကို မလွန်ဆန်နိုင်။
ငါ့အား ခပ်သိမ်းသော နှလုံးကိုပွားစေတတ်သော
အဆွေအမျိုး၊ အဆွေခင်ပွန်း၊ ချစ်ကျွမ်းဝင်သူတို့ နှင့်
အရပ်တစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားသဖြင့် ရှင်ကွဲ ကွဲရခြင်းသည် လည်းကောင်း၊
ဘ၀တစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားသဖြင့် သေကွဲ ကွဲရခြင်းသည် လည်းကောင်း ဖြစ်တတ်ချေ၏။
အမေဆုံးမယ့်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ရင်ဘက်က တအားအောင့်လာလို့ဆရာဝန်ပြကြည့်တော့ ဆရာဝန်က နှလုံးဖြစ်တာလို့ ပြောပြီး ဆေးရုံအမြန်တင်ခိုင်းတာနှင့် ရန်ကုန်က ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုမှာ သွားပြကြတယ်။ အဲဒီဆေးရုံကလည်း နှလုံးနှင့်ပက်သက်တဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ အစုံဆုံးမို့အဲဒီသာ သွားပြဖို့ အကြံထပ်ပေးတာနှင့် နောက်ဆုံးဆေးရုံကြီးရဲ့ အရေးပေါ်ဌာနကို ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ အဲဒီမှာ အမေ့ကို ကြိုးစားကုသနေရင်းနှင့်ဘဲ အမေအသက်ဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ဆေးရုံကို လိုက်သွားကြတဲ့ မောင်နှမတွေပြန်ပြောပြလို့အမေ့ကို ကုသမှုအပိုင်းမှာ လူနာအပေါ် ၀န်ဆောင်မှုလျော့ယွင်းမှုတွေကြောင့် အမေ မသေသင့်ဘဲသေသွားခဲ့ရကြောင်း ကြားသိခဲ့ရပေမယ့်လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလေ။ သေတဲ့သူလည်း သေသွားခဲ့ပြီဘဲ။ အမေကံကုန်မယ့်နေ့ ရောက်လို့သေသွားခဲ့ရတာဘဲ။ သူများတွေကို အပြစ်တင်နေလို့ လဲ ဘာမှ ပြန်ပြီး ထူးလာမှာမှ မဟုတ်တော့တာဆိုတော့။ အမေရေ..ကံရှိသလောက်ပဲပေါ့။
ကျွန်တော် ကားပေါ်ကဆင်းလို့အိမ်ပေါ်တက်သွားချိန်မှာ အမေ့ Body ကို ကန့် လန့် ကာတွေနှင့်ကာပြီး လူနှစ်ယောက် ဆေးထိုးနေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြို့ မှာက ရေခဲတိုက်ကောင်းကောင်းမရှိတော့ ဆေးရုံမှာဆုံးတာမဟုတ်ရင် အားလုံး ကိုယ့်အိမ်မှာဘဲ Body ကို ထားကြပါတယ်။ အခု အမေ့ကို ဆေးထိုးရတာက ကျွန်တော့်အကို တစ်ယောက် ခရီးလွန်နေလို့သူ့ပြန်အလာကို စောင့်ဖို့ အတွက်ပါ။ အမေ့ခမျာ သူ့ ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သူအရင်းနှီးဆုံး ယောင်္ကျားသုံးဦးလုံး သူ့ အနားမှာ ရှိမနေခဲ့ရှာပါဘူး။ ခင်ပွန်းကလည်း ခရီးလွန်၊ သားနှစ်ယောက်ကလည်း အဝေးရောက်။ အဖေကတော့ ဘယ်လိုမှ အချိန်မှီ ပြန်လာလို့ မရတော့လို့မစောင့်တော့ဘူး။ အကိုကတော့ သုံးလေးရက်အတွင်း ပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ သူ့ ကို အမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမီဖို့ စောင့်ကြဖို့မောင်နှမတွေ ဆုံးဖြတ်ပြီး အခုလိုစီစဉ်လိုက်ကြတာပါ။
ကျွန်တော် နှင့် အဖေတို့ ဆန္ဒအတိုင်းသာဆိုရင်တော့ (ဘယ်သူ့ ကိုမှလည်း အခုလို စောင့်စရာမလိုခဲ့ရင်) ၂၄ နာရီအတွင်း သဂြိုလ်ဖို့ စီစဉ်ဖြစ်ကြမှာပါ။ အခုတော့လည်း မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ အကိုကလည်း သူ့ ကို စောင့်ပါဆိုတော့။ တစ်ခုတော့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ရာသီဥတု တအားပူနေတဲ့အချိန်၊ အမေကလည်း ၀တယ်ဆိုတော့ ဆေးထိုးထားတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဆေးထိုးတဲ့သူတွေပြီးသွားတော့ အမေ့နားကို ကျွန်တော်သွားကြည့်မိတယ်။
သြော်....အမေ တကယ် ဆုံးသွားခဲ့ပြီကိုး......
အမေ မဆုံးခင်အချိန်မှာ နာကျင်မှုကို တော်တော်လေးခံစားသွားခဲ့ရပုံပေါ်တယ်။ မျက်နှာက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအရိပ်တွေ ထင်ကျန်နေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ဆေးထိုးထားလို့အိပ်ပျော်သွားရင်းက တခါတည်း အသက်ပါသွားတယ်လို့ ပြောတယ်။
အမေတစ်ယောက် တစ်ဘ၀ စခန်းသိမ်းသွားခဲ့ပြီပေါ့။